Daawo tawaangida Azerbaijan oo 27 sano kaddib geleeysa Degmada Aghdam | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Daawo tawaangida Azerbaijan oo 27 sano kaddib geleeysa Degmada Aghdam
Daawo tawaangida Azerbaijan oo 27 sano kaddib geleeysa Degmada Aghdam
(Aghdam) 20 Nof 2020 – Ciidamada Azerbaijan ayaa galay Degmada Aghdam ee gobolka Nagorno-Karabakh kaddib 27 sanadood oo ay haysteen ciidanka Armenia, sida ay ku dhawaaqday Wasaaradda Gaashaandhigga dalkaasi.
Ciidamada Armenia ayaa haystey 77% ka mid ah degmadaasi tan iyo 1993-kii, iyagoo xoog ku barakiciyey 200,000 oo Azerbaijani ah.
Armenia ayaa sidoo kale ka bixi doonta Degmada Kalbajar oo iyaduna ka tirsan Nagorno-Karabakh Nof. 25, halka ay Degmada Lachin ka baxayso Dis. 1. Waxaa la arkayey dadka Armenian-ka ahaa oo halkaa gawaari uga qaxaya Khamiistii shalay oo ahayd maalintii ugu dambeeysey halkaasi.
Labada dal oo ilaa horraantii 90-meeyadii halkan isku hayey ayaa dib dagaal uga dhex qarxey 27-kii Sebt. Baku ayaa se xoraysatay 5 magaalo oo waawayn, afar dhexaad ah iyo 286 tuulo, kahor intaanay 10-kii Nof. heshiis ku gaarin dalka Ruushka, iyadoo ay Armenia oo garowsatay in aysan u babac dhigi karin awoodda Azeri-gu ay go’aansadeen inay ka baxaan dhulka ku harsan.
Azerbaijani army units roll into Aghdam district ceded by Armenia in peace deal that ended 6 weeks of heavy fighting over Nagorno-Karabakhhttps://t.co/PnuhtPzkvd pic.twitter.com/UyY22VgoXr
— DAILY SABAH (@DailySabah) November 20, 2020
Previous articleXiriirka Sucuudiga & Imaaraadka oo halis ku jira + Waxa la isku hayo (Dokumenti sir ah)
Next articleWiil 18-bil jir ah oo haftey kuna dhintay doonida qubayska (Hooyadii oo samaysay arrin ay hooyooyin badani sameeyaan balse halis ah)